कञ्चनपुर र कैलालीमा जारी गरेको निषेधाज्ञा विहानैदेखि लागु,, के गर्न पाईन्छ ? के गर्न पाईदैन ? -
कञ्चनपुर र कैलालीमा जारी गरेको निषेधाज्ञा विहानैदेखि लागु,, के गर्न पाईन्छ ? के गर्न पाईदैन ?
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार ०८:५० April 29, 2021 Kanchanpur KhabarLeaveaComment on कञ्चनपुर र कैलालीमा जारी गरेको निषेधाज्ञा विहानैदेखि लागु,, के गर्न पाईन्छ ? के गर्न पाईदैन ?
कञ्चनपुर – आज देखि स्थानीय प्रशासनले कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञा लागु भएको छ। कोरोना भाइरसको फैलिएपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न सुदूरपश्चिमको तराईको कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा आज विहानदेखि निषेधाज्ञा लागु गरिएको हो।
आज बैशाख १६ गते बिहान ६ बजेदेखि २२ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लागु गरिएको दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बताएका छन्। जिल्लामा फैलिरहेको संक्रमण दर र मृत्युदरलाई मध्यनजर गर्दै एक हप्तासम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको उनीहरुले बताएका छन्।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम कुमार महतोले निषेधाज्ञा गर्नु पर्ने जटिल परिस्थिति भएकाले सवै आमनागरिकलाई गम्भीरतापूर्वक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरि घरमै सुरक्षित बस्न आग्रह गरे। उनले भने ‘निषेधाज्ञाको उलंघन गरिए कानून बमोजिम कडा कारवाही गरिने पनि बताएका छन्।’
के–के बन्द हुन्छन्, के सञ्चालन गर्न पाइन्छ ?
निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक बाहेक सबै सवारी साधन बन्द रहने छन्। अत्यावश्यक सवारी साधन जस्तै एम्बुलेन्स, खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री बोकेको सवारी साधन, दुग्जन्य पदार्थ बोकेको सवारी, बैंक तथा बित्तीय संस्थाका सवारी, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट र आइशोलेसनका सवारी स्पष्ट खुल्ने कागजातका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्।
खाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसल बाहेक सबै पसल बन्द रहनेछन्। खाद्य सामग्रीका पसलहरु बिहान ५ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने छ। सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी तथा भिडभाड हुने स्थान बन्द रहनेछन्। विवाह व्रतबन्धको हकमा जिल्ला प्रशासनबाट पूर्व स्वीकृति लिएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी बढीमा १५ जनासम्म मात्रै भेला हुन पाउने छन्।
यस्तै नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक बित्तीय संस्था तथा अन्य अत्यावश्यक कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालयले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाउनेछन्। पत्रकारको हकमा भने सूचना विभागले जारी गरेको परिचयपत्र वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त पास आधारमा आवतजावत गर्न पाउनेछन्।
घरमा अक्सिजनकाे सिलिन्डर थुपारेर नराख्न सरकारको आग्रह
२६ फाल्गुन २०७७, बुधबार १८:०३ March 10, 2021 Kanchanpur Khabar
२९ असार २०७७, सोमबार ०९:५६ July 13, 2020 Kanchanpur Khabar
सुनकाे भाउ एकैदिन तोलामा एघार सय र चाँदी ३५ रुपैयाँले बढ्यो
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १३:३४ May 7, 2021 Kanchanpur Khabar
१० असार २०७७, बुधबार ०८:२१ June 24, 2020 Kanchanpur Khabar
बेलडाँडी गा.पा-४ मा राहात स्वरुप खाध्यान्न सामाग्री वितरण
२० चैत्र २०७६, बिहीबार १८:३९ April 2, 2020 Kanchanpur Khabar